Ukudweba kwedatha kuchazwe nge-Semalt
I-WebHarvy iyisofthiwe ethandwa . Iqoqa ngokuzenzakalelayo idatha kusuka kumakhasi ahlukene ewebhu bese igcina okuqukethwe emafomethi afiselekayo. Nge-WebHarvy, ungakwazi ukususa idatha kusuka kumawebhusayithi e-tekinoloji, amaphephandaba, izitolo zezindaba, amarekhodi okuhamba kanye namasayithi e-commerce. I-WebHarvy iqukethe izici eziphambili ezenza sikwazi ukuvuna idatha kusuka kumasayithi anzima kalula. Ezinye zezici zayo ezivelele zichazwe ngezansi.
1. I-WebHarvy ihlamba izithombe namavidiyo:
Nge-WebHarvy, ungakwazi ukukhipha idatha kusuka kuzithombe zakho ozithandayo namavidiyo kalula. Leli thuluzi kuqala likhomba uhlobo lwesithombe bese liyihlwitha ngokwezidingo zakho. Ngokuyinhloko ikhipha ulwazi oluvela kumafayela we-PNG ne-JPG, kodwa ungakwazi futhi ukukhipha idatha emadokhumenti e-PDF.
2. I-WebHarvy ihlela okuqukethwe kwakho kuwebhu:
Esinye isici esihlukile se-WebHarvy ukuthi ihlela okuqukethwe kwakho kuwebhu futhi ikusiza ukuthi ushicilele ngokushesha. Udinga nje ukulungisa amamodeli ambalwa, futhi i-WebHarvy izolanda okuqukethwe ku-hard drive yakho ngokusetshenziswa okungaxhunyiwe ku-intanethi. I-WebHarvy ifanele abantu abangenawo amakhono okuhlela futhi bafuna ukusungula amabhizinisi abo.
3. I-web crawler enamandla kakhulu:
Ngokungafani namanye amathuluzi ajwayelekile wokudonswa kwedatha, i-WebHarvy ikhahla amakhasi akho wewebhu futhi ikusiza ukuba uthuthukise izinga le-website yakho yokusesha. Ungakha futhi amafomu okubhuka oku-intanethi namafomu we-search engine ngaleli thuluzi. Ngokungeziwe, i-WebHarvy izosesha amagama angukhiye futhi izokhipha imininingwane yakho ngaphandle kokuphazamisa amagama angukhiye omude nomsila omfushane.
4. I-WebHarvy idatha idatha kusuka kumawebusayithi ashukumisayo:
Iningi lewebhu le-scraper ayikwazi ukukhipha idatha kusuka kumawebusayithi ashukumisayo futhi ishiya amaphutha amaningi emiphumeleni. Kodwa i-WebHarvy ilungisa zonke iziphambeko kanye namaphutha okupelomagama avela kulokhu okukhiphayo. Iqoqa idatha kusuka kumawebhusayithi e-AJAX futhi iyalanda ngqo ku-hard drive yakho.
5. I-webHarvy ithumela idatha ngamafomethi ahlukene:
Nge-WebHarvy, ungathumela idatha ku-Excel, CSV, XML, JSON, i-SQL Server, i-Oracle, i-MySQL ne-OleDB. Ngaphezu kwalokho, leli thuluzi lingathumela idatha ku-Excel 2003 naku-Excel 2007. Idatha izogcinwa ngokuzenzekela kufomethi efiselekayo.
6. I-WebHarvy inikeza ukuvikelwa kogaxekile:
Nge-WebHarvy, ungaqinisekisa ukuphepha kwakho nobumfihlo ku-intanethi. Leli thuluzi alihambisani nedatha kumawebhusayithi anonya futhi inikeza ukuvikelwa okuphelele kogaxekile kubasebenzisi bayo.
7. Hlela izinhlelo zakho ze-Web Scraping Sessions:
Nge-WebHarvy, ungahlela ama-web ama-web scraping amaseshini futhi unganquma ukuthi mangaki amakhasi ofuna ukuwachitha ngehora. Leli thuluzi lingakhipha amakhasi angama-10 000 wewebhu ngamaminithi angu-30 futhi angenza amaphrojekthi amaningi we-web scraping ngosuku.
8. Ukuhlanganiswa okujulile ne-API yayo:
Leli thuluzi lokukhipha iwebhu linama-API avulekile, okusiza ukudala nokuguqula amaphrojekthi we-web kalula. Ungakwazi ukwenza ngezifiso izilungiselelo zalo futhi ungakhipha idatha usebenzisa i-API eyodwa noma ama-API amaningi.
9. I-WebHarvy ithola idatha yedatha:
Nge-WebHarvy, ungathola okuqukethwe okuphindwe kabili futhi ungayilahla masinyane. Kubalulekile ku-webmaster ukushicilela okuqukethwe kwekhwalithi yezinga eliphezulu lokusesha injini. I-WebHarvy iyithuluzi elizenzekelayo elithola idatha ephindaphindiwe futhi lilungise ngokushesha, okwenza umsebenzi wakho ube lula.
10. I-WebHarvy - I-SEO ithuluzi elinobungane:
Nge-WebHarvy, ungadala idatha kusuka kumathegi wamameta, izithombe, izixhumanisi zangaphakathi nezi zangaphandle kanye namathegi wezimpawu. Kuyithuluzi le-SEO-friendly elisiza ukuthuthukisa i-rankings yokusesha injini yesayithi lakho Source .